ဖုန်း +66 2-101-1588, +66 63-961-5639, +66 81-666-6639
ကနြျောတို့နှဈဦးကိုအခမျးအနားမြားအတှကျစကားပွနျနျဆောငျမှုကိုပေး။ကုနျသှယျမှုမြားအတှကျစကားပွနျ အနကျအဓိပ်ပာယျဖှအခမျးအနား ဖွဈစခွေငျး, AEC ကိုကှနျဖရစကားပွနျပွနျဆို။တရားဝငျနှငျ့တရားမဝငျစတေနာ့ဝနျထမျးစကားပွနျစကားပွနျဝနျဆောငျမှုမြားကိုစကားပွနျရုတျတရကျအရေးပျေါစကားပွနျ။အစိုးရကသို့မဟုတျယငျး၏ဌာနစတိုးဆိုငျကိုဆကျသှယျရနျ။ ကြှနျုပျတို့၏ဝနျဆောငျမှုမြားကိုအဘယျကွောငျ့အပွုံး-စကားပွနျ။
35/8 Moo 2. Nakhon Sub ။ Bangkhunprom ပုံ။ Nonthaburi Nonthaburi ။ 11130
ခရင်းအဲလ်မှအာမခံပေးမှုခံရခြင်း ခရင်းအဲလ် တောက် ခွမ်း အတွင်းရှိအဖွဲ့ဝင်နှင့်ကုန်သွယ်သူများအတွက် ဥပဒေအညီ စင်ကြယ်စွာစစ်ဆေးနိူင်ရန်အတွက် ကုန်သွယ်ရေးမှတ်တမ်းအာမခံခြင်းကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရင်းအဲလ်မှကုန်သွယ်ရေးမှတ်တမ်းအာမခံပေးခြင်း အမှတ်အတမ်းသည် ခရင်းအဲလ်မှ အားမခံပေးခြင်းခံရသော ကုမ္ပဏီအတွက်သာဖြစ်သည်
ကုမ္ပဏီအချက်အလက်, ကုနျပစ်စညျးမြား (10)
35/8 Moo 2. Nakhon Sub ။ Bangkhunprom ပုံ။ Nonthaburi Nonthaburi ။
© 2019 QuinL.Co.th, All Rights Reserved.